Abenzi be-Modulator & Abahlinzeki | China Modulator Ifektri
I-ZJ3308AT 8 ku-1 ATSC Modulator
Ukubuka konke komkhiqizo ZJ3308AT 8 in 1 ATSC modulator ngumkhiqizo osanda kwaklanywa osekela okokufaka kwe-IP. Ineziteshi eziyi-8 ze-multiplexing neziteshi eziyi-8 ze-ATSC, futhi isekela okokufaka okuphezulu okungu-256 IP ngetheku le-GE. I-ZJ3308AT inamandla okukhipha anezinkampani zenethiwekhi ezingama-8 ezingasondelene (50MHz ~ 960MHz) ngokukhipha isikhombimsebenzisi se-RF. Uhlelo lwale divayisi lungalawulwa futhi luthuthukiswe ngenethiwekhi, engasetshenziswa kakhulu kusethaphu yenethiwekhi yokusakaza yedijithali ye-ATSC kanye ne ...
I-ZJ3542D Multi-input Modulator (DVB-T Out)
Uhlaka I-ZJ3542D modulator yokufaka okuningi iyinto yonke-in-one ehlanganisa ukwehliswa kwemodi, i-trans-mux nokushintshashintsha kwesimo esisodwa ukuguqula amasiginali abe yi-RF. Kuyicala le-1-U elisekela okokufaka kwe-4 tuner ukuthola isignali kusuka kusathelayithi, ikhebuli noma umhlaba. Ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende, i-ZJ3542D ibuye ifakwe okokufaka okungu-2 ASI, nokukhipha ngamaqembu ama-2 ahlukene amachweba we-ASI kanye ne-2 MPTS UDP IP port. Izimpawu ezilinganiselwe zokukhipha kufanele zamukelwe ngama-TV, STB nokunye. I-USB por ...
Uhlaka i-ZJ3402E yi-modulator esebenza kahle kakhulu eyenziwe ngokuya nge-DVB-S2 (EN302307) standard okuyizinga lesizukulwane sesibili se-European broadband satellite telecommunication. Kungukuguqula okokufaka kwe-ASI ne-IP kungenjalo kube okukhiphayo kwe-digital DVB-S / S2 RF. Imodi yokugxoba i-BISS ifakwe kule modulator ye-DVB-S2, esiza ukusabalalisa ngokuphepha izinhlelo zakho. Kulula ukufinyelela ekulawuleni kwasendaweni nokude nge-Web-server NMS software ne-LCD kuphaneli engaphambili ....
8 1 Module ye-DVB-T
Uhlaka Lwesimoduli se-8 ku-1 se-DVB-T iyidivayisi ekwi-in eyodwa eyenziwe yithi. Ineziteshi eziyi-8 ze-multiplexing neziteshi eziyi-8 ze-DVB-T zokumodela, futhi isekela okokufaka okuphezulu okungu-256 IP ngetheku le-GE kanye nezinkampani ezingama-8 ezingasondelene (50MHz ~ 960MHz) ngokukhipha isikhombimsebenzisi se-RF. Idivayisi ibuye ibonakale ngezinga eliphakeme elihlanganisiwe, ukusebenza okuphezulu nezindleko eziphansi. Lokhu kuvumelana nezimo ohlelweni lokusakaza olusha lwe-DTV. Izici Eziyinhloko ● Amachweba we-3 GE (max 256 IP in): Idatha1 neDat ...
Ukubuka konke komkhiqizo I-ZJ3306I 6 ku-1 ISDB-T modulator iyisetshenziswa sakamuva sokwenza umkhiqizo se-Mux. Ineziteshi ezi-6 ze-multiplexing neziteshi ezi-6 (ISDB-Tb) zokuguqula amandla, futhi isekela okokufaka okuphezulu kwe-IP kwe-IP ngamachweba ama-3 GE kanye nezithuthi ezingama-6 ezingekho eduze (50MHz ~ 960MHz) ngokukhipha isikhombimsebenzisi se-RF. Idivayisi ibuye ibonakale ngezinga eliphakeme elihlanganisiwe, ukusebenza okuphezulu nezindleko eziphansi. Lokhu kuvumelana nezimo ohlelweni lokusakaza olusha lwe-DTV. Izici ezibalulekile ● Amachweba we-3 GE (ma ...
I-ZJ2406B DVB- (T) Modulator
Uhlaka I-ZJ2406B DVB- (T) modulator iyidivayisi yethu yonke-in-one ehlanganisa ukwehla kwamandla emodi, i-trans-mux nokushintshashintsha kwesimo kokunye ukuguqula amasiginali abe yi-DVB- (T) RF okukhiphayo nokukhishwa kwe-IP nge-UDP. Idivayisi ifakwe okokufaka kwe-2 DVB-S / S2, imbobo eyodwa yokufaka ye-GPS 10MHz kanye nechweba elilodwa lokufaka le-1PPS. Izimpawu ezilinganiselwe zokukhipha kufanele zamukelwe ngama-TV, STB, njll. Lesi simoduli se-DVB- (T) futhi ngasikhathi sinye sisekela ukuhlanekezelwa kwangaphambi kwedijithali okuhambisanayo nokungaqondile. Umsebenzi we-BISS nawo ushumekiwe ...
I-ZJ2406 DVB-T2 Modulator Front and Back Panel Umfanekiso
Uhlaka ZJ2406 DVB-T / T2 modulator kuyinto umkhiqizo wethu omusha athuthukiswe ngokuhambisana ne-DVB-T / T2 ejwayelekile. Ngobuchwepheshe bayo bokuthuthuka obuthuthukile, le modulator ingakwazi ukusebenzisa kahle izinsiza zemisebe yomhlabathi futhi ikwenze kube nokwenzeka ukunikeza amasiginali anokwethenjelwa wamadivayisi ahleliwe, aphathekayo naphathekayo. Uma kuqhathaniswa ne-DVB-T, umthamo wesiteshi ukhushulwa ngama-30% ngaphansi kwesithwali esifanayo nomkhawulo wenani lomsindo (CNR). Ngaphezu kwalokho, le divayisi ingathuthukiswa futhi ilawulwe nge-network syst ...
I-ZJ2406 DVB- (T) Modulator
Uhlaka modemulator ye-ZJ2406 DVB- (T) ngumkhiqizo wethu omusha othuthukiswe ngokuhambisana nezinga le-DVB- (T). Ngobuchwepheshe bayo bokuthuthuka obuthuthukile, le modulator ingakwazi ukusebenzisa kahle izinsiza zemisebe yomhlabathi futhi ikwenze kube nokwenzeka ukunikeza amasiginali anokwethenjelwa wamadivayisi ahleliwe, aphathekayo naphathekayo. Uma kuqhathaniswa ne-DVB-T, umthamo wesiteshi ukhushulwa ngama-30% ngaphansi kwesithwali esifanayo nomkhawulo wenani lomsindo (CNR). Ngaphezu kwalokho, le divayisi ingathuthukiswa futhi ilawulwe ngohlelo lwenethiwekhi ...